जाडो मौसममा हात मुलायम राख्न अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । जाडो मौसममा हातको सुरक्षा गर्न निकै कठिन हुन्छ । चिसो हावा , ज्यादा काम र अपर्याप्त निन्द्रको कारण मुलायम हात पनि रूखो बन्ने गर्छ । यहाँ रूखो र फुटेको हातबाट सजीलै छुटकरा पाउने घरेली उपाय बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
ठुलो स्वरमा मस्तिष्कले छिटै प्रतिक्रिया दिन्छ : शोध
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । यदि कसैले ठुलो स्वरमा धम्की दियो भने मानिसको दिमागले निकै छिटो त्यसको प्रतिक्रिया दिने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो पाइएको हो । ... बाँकी अंश»
चिसोले बढायो बिरामी
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, बाजुरा । चिसो बढेसँगै जिल्ला अस्पताल मार्तडीमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अहिले दिनहुँ ५० देखि ६० बिरामी आउने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
बेहोस नपारी ट्युमर निकालियो
२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार, काठमाडौँ । मिर्गी रोग (छारे रोग) भएका २२ वर्षीय सर्फराजको मस्तिष्कबाट ट्युमर निकाल्न नेपाली चिकित्सक सफल भएका छन् । ... बाँकी अंश»
नेविसंघद्वारा वाईटकोट सेरेमोनी
२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार, काठमाडौं । आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरमा वाईटकोट सेरेमोनी कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। क्याम्पसमा यसै शैक्षिक वर्ष भर्ना भएका बीएएम्एस् २३ औं ब्याचका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल विद्यार्थी संघ आयुर्वेद क्याम्पस इकाईद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सो सेरेमोनीको आयोजना भएको हो। ... बाँकी अंश»
६० वर्षको उमेरमा क्यान्सर, विना उपचार १०२ वर्षसम्म बाँचे यी व्यक्ति
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौं । क्यान्सर प्रणघातक रोग हो । यो रोगबाट पार पाउने केही भाग्यमानी मानिसहरु मात्र हुन्छन् । यद्यपि संसारमा यस्ता पनि मानिस छन् जसलाई बुढेसकालमा यो रोग लागेर पनि ५ दशक बाँचेका थिए । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौँ ।“दुर्गमका जिल्ला एवं क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा दिन जान मान्दैनन् । गए पनि लामो समय टिक्दैनन्”, भन्ने आम बुझाइ छ । ... बाँकी अंश»
१५ दिनमै मोटोपना घटाउन के गर्ने ?
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, एजेन्सी । कुनै पनि मानिसलाई मोटोपनको सिकार हुन मन हुदैन । मोटोपनाले शरीरमा बिरामीको समस्या त ल्याउछ नै व्यक्तित्व पनि खराब बनाउदछ । तौल कम गर्नको लागि मानिसहरु अनेक प्रकारको उपाय अपनाउँछन् । यद्यपि गर्मी सिजनमा तौल घटाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा छ । त्यसैले यस सिजनमा तौल कम गर्न बढी प्रयास गर्नुहोस् । ... बाँकी अंश»
‘संसर्गले छुटाउँछ कुलत’
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, एजेन्सी । यौनसम्बन्धी क्रियाकलाप जस्तै पोर्न साइट हेर्ने बानी भएका व्यक्तिलाई चेन स्मोकरलाई जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन जारी रहेको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले पोर्न भिडियो हेरि रहने १९ जना मानिसको दिमागको अध्ययन गरेका छन्। यौनको लत भएका व्यक्ति र लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको दिमागमा उल्लेखनीय समानता पाइएको छ। यी दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्धबारे पहिलो अध्ययन भएको हो । ... बाँकी अंश»
स्विजरल्याण्डले दियो 'फाइब्रोस्क्यान मेशिन', वीपीमा कलेजो रोगको उपचारमा सहजता
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, धरान । वीपी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कलेजो सम्बन्धि रोगको उपचारमा सहजता हुने भएको छ । स्वीटजरल्याण्डको जेनेभा युनिभर्सिटी हस्पिटलले कलेजो परीक्षणका लागि अति आवश्यक पर्ने उपकरण फाइब्रोस्क्यान मेशिन प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएपछि सहजता हुने भएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर १८ मंगलबार, काठमाडौं । महिलाको तुलनामा पुरुषलाई धेरै डाइट खानुपर्छ । त्यसमा पनि चिसो मौसममा पुरुषको शरीरलाई बढी क्यालोरी भएको खानेकुरा चाहिन्छ । तसर्थ स्वस्थ्य रहन बढी क्यालोरी खान पनि चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । ... बाँकी अंश»
एड्सबाट आठको मृत्यु
२०७५ मङ्सिर १६ आइतबार, सल्यान । एचआइभी एड्सका कारण यहाँ आठ जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०६८ देखि हालसम्म सङ्क्रमित आठ जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा २० देखि ६० वर्ष उमेरका छन् । ... बाँकी अंश»
पाँचथरमा ६ जना एचआईभी संक्रमित, २ जनाको मृत्यु
२०७५ मङ्सिर १५ शनिबार, पाँचथर । ३१ औ विश्व एड्स दिवस विविध कार्यक्रम गरेर मनाइरहँदा पाँचथरमा अहिले ६ जना एचआईभी संकक्रमित रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरको तथ्याङक अनुसार ४ जना पुरुष र २ जना महिलाहरु एचआईभी संक्रमित रहेको पाइएको हो । उनीहरुले निरन्तर औषधी सेवन गरिरहेको जिल्ला अस्पताल पाँचथरका प्रमुख बुद्धिबहादुर थापाले जानकारी दिए। ... बाँकी अंश»
सन्तान चाहनुहुन्छ ? नखानुहोस यी खानेकुरा
२०७५ मङ्सिर १५ शनिबार, काठमाडौं । कति मानिसहरु सन्तानको इच्छा गर्छन् तर पनि सन्तान भइरहेको हुदैन । उनिहरुलाई गर्भधारण पछि के खानु हुदैन त्यसको थाहा नहुन सक्छ । यदि तपाई पनि गर्भवती हुँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने यी खानेकुरा नखाएकै राम्रो । ... बाँकी अंश»
भेरी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, अस्पताल विकास समिति उदासिन
२०७५ मङ्सिर १५ शनिबार, बाँके। भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अभाव देखिएको छ । चिकित्सक अभावकै कारण एउटै चिकित्सकले क्षमताभन्दा बढी बिरामीको उपचारमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ... बाँकी अंश»
गाउँमै सरकारी सेवा पाएपछि स्थानीयमा खुशी
२०७५ मङ्सिर १३ बिहिबार, पाल्पा । जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकामा शिविर मार्फत सरकारी सेवा पाएपछि स्थानीय खुशी भएका छन् । स्वास्थ्य शिविर मार्फत सरकारी सेवा पाउँदा आफुहरु खुसी भएको गाउँपालिका ५ हात्तिलुङ्गका स्थानीय झमकला थापाले बताईन् । ... बाँकी अंश»
गेटा मेडिकल कलेजको भवनको प्रगति ६० प्रतिशत
२०७५ मङ्सिर १३ बिहिबार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा आवश्यक विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माणको काम जारी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
पुरुषको क्षमता बढाउने १० खानेकुरा
२०७५ मङ्सिर १२ बुधबार, काठमाडौं । घरमा नयाँ सन्तान भित्रिनका लागि जति महिलाको प्रजनन क्षमता मजबुत हुन जरुरी छ, त्यतिक्कै मजबुत पुरुषको प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) पनि हुन जरुरी छ । यदी खानेकुरामा यी १० चीजहरु भएको खण्डमा पुरुषको प्रजजन क्षमतामा बृद्धि हुन्छ । ... बाँकी अंश»
ब्रेन ट्यूमर र क्यान्सरको लागि उपयुक्त औषधी महले पाएन बजार
२०७५ मङ्सिर १२ बुधबार, दार्चुला । व्रेन ट्युमर र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निक्कै उपयोगी महले दार्चुलामा बजार पाएको छैन । महमा हुने एन्टी अक्सिड र एन्टी सेप्टिक क्यान्सरको उपचारका लागि उपयोगी हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समय मौरीपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको बेला मौरीपालक किसानले भने बजार अभाव हुन थालेको गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका लेकम, मालिकार्जुन, मार्मा र ब्यास गाउँपालिकामा मौरीपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । ... बाँकी अंश»
अब सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : मन्त्री ज्ञवाली
२०७५ मङ्सिर १२ बुधबार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले अब सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। अहिले २५ जिल्लामा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएकाले चाँडैनै देशभरका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुने जानकारी दिए। ... बाँकी अंश»